Toeram-pitrandrahana hafanana dobo filomanosana, mpamatsy - mpanamboatra paompy hafanana milomano avo lenta
SolarShine 25-50 HP Pump pump heat heat dia vokatra avo lenta natao ho an'ny dobo filomanosana anaty sy ivelany.
Ny singa mandia hafanana solarshine dia karazana fitaovana vaovao hanamafisana ny hafanana ao anaty pisinina, mamakivaky ny toe-javatra "mahamenatra" amin'ny fianteherana amin'ny solika mineraly ho an'ny hafanana tsy tapaka amin'ny lasa. Noho ny fanoherana ny harafesina dia voavonjy ny fampiasam-bolan'ny mpanova hafanana antonony ary tsotra kokoa ny fametrahana azy.
10-12 HP Pump Pump Heat Heat
SolarShine 10-12 HP Unitie paompy hafanana dobo filomanosana dia afaka mitazona ny hafanan'ny rano ao anaty dobo filomanosana ao anatin'ny elanelam-potoana ahazoana 38-40 ℃. Ny fahombiazan'ny paompin-heat heat pool dia hatramin'ny 500%.
Paompy hafanana 5-7 HP
SolarShine 5-7 HP Unitie paompy hafanana dobo dia afaka mitazona ny mari-pana amin'ny dobo filomanosana ao anatin'ny mari-pana mahasoa 38-40 ° C，IZA dia famolavolana integral, firafitra mifangaro, fisehoana tsara tarehy, habaka kely nobodoina, fametrahana mora sy malefaka.
1.5- 2Hp Fandroana hafanana dobo filomanosana kely ho an'ny pisinin-trano manokana
Ny paompy hafanana lomano 1.5- 2Hp an'ny SolarShine dia vokatra avo lenta natao ho an'ny dobo filomanosana anaty na ivelany. Ny singa paompy hafanana dia afaka mitazona ny hafanan'ny rano ao anatin'ny maripana 28-30 ° C.
2.6KW hatramin'ny 22KW Paompy hafanana anaty rano sy anaty rano
Ny paompin-tsolika misy an'ny dobo filomanosana an'ny SolarShine dia natao ho an'ny fanamafisana ny rano amin'ny karazan-dobo filomanosana isan-karazany, ahitana dobo ivelan'ny varavarana sy dobo eo am-baravarana, dobo kely any an-trano na dobo fivarotana lehibe. Izahay dia manana paompy mitoby andiany andiany avy2.6KW ka hatramin'ny 22KW / 3HP ka hatramin'ny 25HP misy.
2.5- 4 Pump Pump Heat Heat Pool
SolarShine 2.5- 4 HP Pump pump heat heat dia vokatra avo lenta natao ho an'ny dobo filomanosana anatiny na ivelany. Izy io dia mety amin'ny fanafanana sy ny hafanana tsy tapaka ho an'ny pisinina, 22500 BTU -36000 BTU
15-20 HP Pump Pump Heat Heat
SolarShine 15-20 HP Fantsom-pamokarana hafanana dobo filomanosana dia afaka mitazona ny hafanan'ny rano ao anaty dobo filomanosana ao anatin'ny elanelam-potoana ahazoana 38-40 ℃， afaka mamonjy 4-5 heny vidin'ny fanafanana ampitahaina amin'ny fitaovana fanamafisana angovo nentim-paharazana toy ny heater elektrika na heater-bozy.
3- Pump Pump Heat Pool amin'ny 50Hp ho an'ny pisinina lehibe
Ny paompy mafana an'ny dobo lomano 3SH an'ny SolarShine dia vokatra avo lenta natao ho an'ny dobo filomanosana anaty sy ivelany.